म्याग्दीमा डेंगी र स्क्रबटाइफसका बिरामी बढे | Nagarik News - Nepal Republic Media
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै डेंगी र स्क्रबटाइफसका बिरामी म्याग्दीमा भेटिएका छन्। गत वैशाखयता म्याग्दीमा डेंगीका ६४ र स्क्रबटाइफसका ४३ बिरामी फेला परेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ।
गत वर्ष म्याग्दीमा १२ जनामा डेंगी र एक जनामा स्क्रबटाइफस भेटिएकोमा यस वर्ष हरेक महिना बिरामीको संख्या देखिन थालेपछि म्याग्दीमा जोखिम बढेको छ। प्रदेशमा म्याग्दीपछि धेरै कास्कीमा २०, लमजुङमा १०, स्याङ्जामा चार, नवलपरासीमा तीन, बागलुङमा दुई, पर्वत र गोरखामा एक–एक जना डेंगीका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख दिवाकर शर्माले जानकारी दिए। हालसम्म मुस्ताङ, तनहुँ र मनाङबाहेक सबै जिल्लामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगीका बिरामी फेला परे पनि म्याग्दीबाहेक अन्य जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा कम भएको बताइएको छ। कडा ज्वरो आउने, आँखाको गेडी रातो हुने, शरीरमा बिमिरा आउने, आन्तरिक रक्तश्राव हुने, जोर्नी, मांसपेशी दुख्ने, नाक तथा गिजाबाट रगत बग्नेजस्ता लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारको क्रममा डेंगी र स्क्रबटाइफस पोजेटिभ देखिएको बेनी अस्पतालका मेडिकल कोअर्डिनेटर डा. नवराज बस्ताकोटीले बताए। ‘दैनिकजसो नै बिरामी भेटिन थालेका छन्, ‘ट्राभल हिस्ट्री नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेमा धेरै देखिएको छ,’ डा. बस्ताकोटीले भने। उनले एउटै मानिसमा डेंगी दोहोरिएमा र समयमै उपचार नभएमा आन्तरिक रक्तश्रावले बिरामीको मृत्यु हुनसक्ने भए पनि यो रोगको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर भने कम रहेको बताए। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकमा म्याग्दी धेरै संक्रमित भेटिने नेपालभरिमै पाँचौं जिल्लामा पर्ने बताइएको छ।
डेंगी सार्ने लामखुट्टेको जीवनचक्र ९ दिनमै पूरा हुने भएकाले लार्भा हुर्काउन पर्याप्त समय पाउने डा. बस्ताकोटीको भनाइ छ। मुसामा हुने किर्नाबाट सर्ने स्क्रबटाइफस परजीवीको संक्रमणबाट स्क्रब टाइफस र एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगी संक्रमण हुने गरेको छ। मुसामा हुने परजीवीलाई एक प्रकारको माइट जातिको सूक्ष्म किराको माध्यमले स्क्रबटाइफस मानिसमा सर्ने भएकाले म्याग्दी क्रबटाइफसको उच्च जोखिममा समेत रहेको छ। रोग समयमा पत्ता नलागेमा कलेजो, मिर्गौला, फोक्सो, मुटुलगायत अंगमा संक्रमण फैलिई बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ।
बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेसँगै बिरामी भेटिएका क्षेत्रमा खोज र नष्टको अभियान सञ्चालन गरिएको छ। डेंगी संक्रमण नभएका लामखुट्टेले टोकेमा भने डेंगी सर्दैन। लामखुट्टेले टोकेको ५ देखि ७ दिनभित्र डेंगी संक्रमण हुन्छ। डेंगी सार्ने लामखुट्टे सफा तथा स्थिर पानीमा बस्ने भएकाले सदरमुकाम बेनीमा यो सर्ने सम्भावना पर्याप्त रहेको छ। जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई संक्रमण हुने डेंगी डिइएन भी–१, डिइएन भी–२, डिइएन भी–३, डिइएन भी–४ गरी चार प्रजातिका हुन्छन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०८:२० बिहीबार